गर्भावस्था, बच्चा जन्म | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: गर्भावस्था, बालबालिका
करगांडाको मान्छेलाई प्रवाट गर्नुहोस्, अब मातृत्व अस्पतालमा बच्चाहरु लाई VIKASOL को इंजेक्शन दिइएको छ। के यो अनिवार्य प्रक्रिया हो वा आमाको सहमतिको साथ?
कारागान्डाका प्रम्प्ट निवासीहरू, अब प्रसूति अस्पतालहरूमा बच्चाहरूलाई VIKASOL बाट ईन्जेक्सन गरिन्छ। यो अनिवार्य प्रक्रिया हो वा आमाको सहमतिले? एक लिखित छूट अग्रिम लेख्नुहोस्। र यो तिनीहरूको लागि हो जसले आफूलाई सबैभन्दा बढी मान्दछन् ...
2 मा 1 काजटेक्स ट्रामोन्टो 14 फ्याक्स। कसले यो घुमाउरो छ?
२ १ काजटेक्स ट्रामन्टो १ lin लिनन। कोसँग यो घुम्ने व्यक्ति छ? यो काज्रिक फिर्ता फ्याँक्न सजिलो छैन, प्रभु, एक कारपेट पर्खाल वा कालीनबाट बनेको गाडी हो? !!! मलाई मन पर्छ। तर! sooo असहज ...
अस्पतालमा कसरी जन्मेको कारण? के हो?
बच्चाको जन्म अस्पतालमा कसरी हुन्छ? कन्सन्स के हो? बच्चाको जन्मको उत्तेजनामा ​​एउटा ठूलो नोक्सान हुन्छ - शरीर बच्चा जन्माउनको लागि तयार हुँदैन। उनीहरूले मेरो गर्भाशयलाई उत्तेजित गरे, गर्भाशयमा एक दिनको लागि यसको ईन्जेक्शन गरे ...
जेनेरिक प्याकेज - यसमा के समावेश छ।
जेनेरिक प्याकेज - यसमा के छ। फार्मेसीमा रेडिमेड किन्न यो सजिलो र सस्तो छ। यस प्याकेजले डिस्पोजेबल डायपर gynecological सेट, डिस्पोजेबल क्याप, जुत्ता कभर, गाउन, आदि समावेश गर्दछ। संक्षेपमा, के ...
तपाईंलाई डायपर, ड्रेसिङ र नयाँ जेब्रेरी तयार गर्ने सबैलाई कति चाहिन्छ?
नवजात शिशुलाई कति पिपरहरू, अन्डरशर्टहरू र सबै अरू तयारी गर्न आवश्यक छ? हामी लड्दैनौं, हामीसँग १०-१२ तातो डायपर र thin पातलो हुन्छन्, सामान्यतया पर्याप्त। ज्याकेट र स्लाइडरहरूलाई कम्तिमा 10 आवश्यक छ ...
तपाईंले नयाँ जन्मेको लागि स्नान कसरी गर्नुभयो? कुन आधारमा?
कसरी तपाईंले बच्चा नुहाउने छनौट गर्नुभयो? कुन मापदण्ड द्वारा? कुनै पनि होईन। २ महिना सम्म हामीले नर्सरीलाई साधारण स्नानमा धोयौं, र जब हामी बलियो हुन्छौं हामीले स्लाइड किनेका छौं, हामीले यसलाई नुहाउने ठाउँमा राख्यौं ...
के कसैले 25-27 हप्ताको जन्म दिए? वा शायद त्यहाँ त्यस्ता साथीहरू छन्?
के कसैले २ 25-२27 हप्तामा जन्म दिएको छ? वा हुन सक्छ त्यस्ता परिचितहरू छन्? साथीहरूले यस गर्मीमा केस पाएका थिए, भर्खर रक्तस्राव भयो र एउटा सिजेरियन गर्नुपर्‍यो, एक केटाको जन्म भएको थियो र, भगवानलाई धन्यवाद दिनुहोस् ...
प्रिय महिलाहरु, मलाई भन्नुहोस्, गोलियाँ प्या पैक मा डुप्स्टस्टन मूल्य कति हुन्छ, यसलाई कसरी लिने, परिणाम के हो?
प्रिय महिलाहरू, मलाई बताउनुहोस्, प्यालको प्याकेटमा ड्यूफ्यास्टनको कति खर्च हुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ?, परिणामहरू के छन्? यदि लक्ष्य जन्म दिन र सहनको लागि हो - तपाईंले पिउनु पर्छ। यदि लक्ष्य फिगर आदि हो भने, पिउनुहुन्न। 450० रूबल ...
prikorm। मासु कति महिना पहिलो मासु, सुँगुर, चिकन के हो? जब तपाईं दिन सक्नुहुन्छ?
प्रलोभन कति महिना देखि मासु? कुन पहिलो गोमांस, सुँगुरको मासु, कुखुरा? श्रोभ जब म दिन सक्छु? यदि त्यहाँ एलर्जी छैन भने, तपाईं उबलाइएको पातलो मासु (कुखुरा वा गाईको मासु) छ महिनाको लागि दिन सक्नुहुनेछ, पहिलो धेरै सानो ...
मस्तिष्कको समयमा ओभोल्युसन ????
मासिक धर्मको समयमा ओभुलेशन ???? ओभुलेशनको साथ, तापक्रम सामान्यतया खस्किन्छ। यस्तो उच्च तापमान विभिन्न कारणका लागि हुन सक्छ - यो पहिलो चरणमा हर्मोनको अभाव हो, र सूजन, र हुनसक्छ यो तपाईंको हो ...
के म नर्सिङ आमा चावल खान सक्दिन ???
के म मेरो नर्सि mother आमाको लागि चामल खान सक्छु ??? तपाईं ...)) ... ... ममीलाई अचम्म लाग्छ - तपाईले नयाँ चीजहरू परिचय गरेर लगभग सबै खान सक्नुहुन्छ - थोरै खानु र बच्चाको प्रतिक्रियालाई हेर्नुहोला - यदि मल सामान्य छ र त्यहाँ एलर्जी प्रतिक्रिया छैन भने, तब ...
कहिलेकाहीँ तपाईं गर्भनिज्ञज्ञलाई कति पटकको लागि जानुभयो? र यो 1 वें स्वागत कसरी छ?
गर्भावस्थाको अवधिमा तपाईं पहिलो पटक स्त्री रोग विशेषज्ञमा जानु भयो? र यो पहिलो स्वागत कसरी जान्छ? १० हप्तामा गर्भवती कार्ड पाउनुहोस्। तपाईंको बारेमा सबै जानकारी त्यहाँ लेखिएको छ ...
के गर्भावस्थाको बेला बुनाई गर्न सम्भव छ ????
के म गर्भावस्थामा बुनाई गर्न सक्छु ???? मैले बुनेको सुई र हातहरू (म्याक्रमे) बाट बुनिदिएँ, दुबै छोरीहरू आफैं जन्मेका थिए, सुन्दर र स्वस्थ छन्, जुन म तपाईंको लागि चाहन्छु। र संकेतको बारेमा, तपाईंको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुहोस् ...
भविष्यमा आमाले डुप्स्टस्टन लिनुभयो? यो किन निर्धारित छ?
कुन गर्भवती आमाले डुफस्टनलाई लगिन्? किन यो सिफारिस गरिएको छ? Www.babyplan.ru मा सोध्नुहोस् - एक राम्रो साइट। डुफस्टन एक हार्मोन थेरापी औषधि हो र प्रोजेस्टेरोनको अभावसँग सम्बन्धित विभिन्न प्याथोलॉजिकल अवस्थाहरू सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
यो मेनुस्ट्रेशनको लागि गर्भावस्था परीक्षण प्रयोग गर्न सम्भव छ।
के यो मासिक धर्म संग गर्भावस्था परीक्षण प्रयोग गर्न सम्भव छ। तपाईं आफ्नो अवधिमा परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ। ऊ पक्कै पनि आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउने छैन, किनकि यो hCG हार्मोन को लागी प्रतिक्रिया गर्दछ। तसर्थ, यदि तपाइँ आशा गर्नुहुन्छ ...
कब सम्म यो ले तपाईंलाई गर्भवती प्राप्त गर्न को लागी ???
कति समय लाग्यो तपाईंले गर्भवती हुन ??? पछि गर्भधारण गर्नका लागि मैले गर्भनिरोधक पदार्थहरू पिएँ। मैले तिनीहरूलाई पिउन छोडे पछि, म २ महिना पछि गर्भवती भएँ। यो पूर्ण रूपले व्यक्तिगत हो। उदाहरण को लागी म…
जसले गर्भपात गरे? कति हप्ता हरु रहेछन्, र तपाईलाई कस्तो लाग्छ?
कसले मेडिकल गर्भपात गर्यो ???? कति हप्ता सम्म यो गर्‍यो, र यसको पछाडि स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ ??? म बुझ्दछु कि प्रश्न केहि अर्कोको बारेमा छ। तर अझै पनि, केहि तरिका तपाईं गर्भपात बिना गर्न सक्नुहुन्छ? शारीरिक परिणामहरु निको हुनेछ, र ...
29 हप्तामा बच्चा जन्माउन सक्छ र बच्चा बच्न सक्नुहुनेछ ????
के बच्चा जन्माउन २ weeks हप्तामा सुरु हुन सक्छ र बच्चा बाँच्नेछ ???? म दुर्भाग्यपूर्ण थिएँ त्यसैले केटी 29० (born (((र ... र तपाईंलाई झूटो संकुचन हुन सक्छ)) मा मेरो बच्चाको जन्म भएको थियो।
डायनामिक अल्ट्रासाउन्ड के हो? श्रोणि अंगहरूको अल्ट्रासाउन्ड
डायनामिक अल्ट्रासाउन्ड के हो? श्रोणि अंगहरूको अल्ट्रासाउन्ड यो नियमित अन्तराल मा धेरै चोटि श्रोणि अंगहरूको एक अल्ट्रासाउन्ड परीक्षा हो। महिलाको श्रोणि अंगहरूको अल्ट्रासाउन्डको साथ, गर्भाशय जाँच गरिन्छ, ...
अनि गर्भवती महिलाहरूमा विषाक्तिकस कहिले सुरु हुन्छ? अनि गर्भवती महिलाहरूमा विषाक्तिकस कहिले सुरु हुन्छ?
र गर्भवती महिलाहरूमा विषाक्तता कहिले सुरु हुन्छ? र गर्भवती महिलाहरूमा विषाक्तता कहिले सुरु हुन्छ? ठीक ढिलाइ पछि, वा केहि अलि अगाडी, म पहिलो हाफ क्यान मा बिल्कुल Toxicosis थिएन।
77 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,959 प्रश्नहरू।